नेपालको लागी खोप माग्दै बेलायती गोर्खा सैनिक प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि:: Mero Desh
नेपालको लागी खोप माग्दै बेलायती गोर्खा सैनिक प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि
Published on: १ असार २०७८, मंगलवार १४:४७
लन्डन । कोभिड-१९ महामारीविरुद्ध नेपाललाई तत्काल सहायता प्र’दान गर्न आ’ग्रह गर्दै मंगलबार लन्डनमा र्‍याली प्र’दर्शन भएको छ गोर्खा सैनिक संगठनले आयोजना गरे को र्‍याली प्र’दर्शनमा अन्य नेपाली समुदाय पनि सहभागि थिए उनीहरुले तत्काल नेपाललाई खोप लगायतका स्वा स्थ्य सहायता उ’पलब्ध गराउनुपर्ने र समान पेन्सन प्र’दान गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए ।
उनीहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको डाउनिङ स्ट्रिट अघि पनि प्र’दर्शन गरेका थिए ।गतसाता बेलायती सांसदहरुले पनि नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउन दबाब दिँदै विदेशमन्त्री डोमिनिक रावलाई अपिल गरेका थिए । प्लेकार्ड र नारासहित उनीहरुले बेलायती राजधानी मा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
यो पनि :संघीय सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोषलाई दुईवटा प्रदेशले भने निरन्तरता दिएका छन् ! गण्डकी र प्रदेश २ ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सो कोषलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसपालीको बजेटबाट सो कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । अत्यधिक आलोचनामा पर्दै आएको कोषलाई प्रदेशले पनि बन्द गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी र जसपा नेतृत्वको प्रदेश २ ले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यकमबारे जानकारी दिएका थिए । उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम परिमार्जनसहित लागू गर्न ७२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको बताएका छन् । तर, प्रत्येक सांसदलाई यति दिने भनेर छुट्याएका छैनन् ।
३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा यसअघिको सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २/२ करोडका दरले बजेट छुट्याएको थियो ! प्रदेश २ ले पनि संसद विकास कोषका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, प्रतिपक्षी संसदहरुले बजेट अपुग भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
रा’ष्ट्रिय आ’विष्कार के’न्द्रले वितरण गरेको सामानहरुको विवरण: तस्वीर सहित
ओली र नेपाललाई योगेश भट्टराईको प्रश्न- ‘युथ फोर्स र अखिल फोर्सको औ’चित्य के ?’